China Belt, famokarana feeder rojo sy orinasa | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny mpamatsy fehikibo dia manana rafitra tsotra sy fiasa miorina, indrindra ny habetsahan'ny famahanana be dia be no tian'ny mpampiasa. Ny fivoarana ara-teknika lehibe anay dia ny fitaovana mpandika zana-kazo, izay afaka manamaivana tsara ny tsindry eo am-bavan'ny tavoahangy sy misoroka ny fantsom-baravarana ao am-bava.
Ny mpamatsy fehikibo dia manana rafitra tsotra sy fiasa miorina, indrindra ny habetsahan'ny famahanana be dia be no tian'ny mpampiasa. Ny fivoarana ara-teknika lehibe anay dia ny fitaovana mpandika zana-kazo, izay afaka manamaivana tsara ny tsindry eo am-bavan'ny tavoahangy sy misoroka ny fantsom-baravarana ao am-bavany. Ny fehin-kibo vita amin'ny karazana 6 + 1 dia namboarina indray mandeha, miaraka amin'ny kofehy nilona 6 sy ny harona 1 misy harato vy vita amin'ny diamondra vita amin'ny jiro nafarana avy any Japon. Izy io dia manana fanoherana mahery vaika, fanoherana ny fifandonana, fanohanana amin'ny fandoroana ary ny sisin'ny zipo ivelany dia tsara ihany koa. Fitaovana an'arivony taonina isan'ora, mahafaly tsara ny filan'ny famokarana maoderina, mamorona tombony ara-toekarena lehibe ho an'ny mpanjifa.
Ny feeder rojo dia mandray ny fitsipiky ny fihodinan'ny planeta, ny porofon'ny fidirana sy ny vokatra dia mitovy amin'ny axis, ary manana ny mampiavaka ny fifandraisana mivantana amin'ny motera, noho izany dia misy rafitra matevina, endrika tsara sy vaovao, volavola kely ary lanja maivana. Ny fivorian'ny fitaovana dia vita amin'ny vy vy. Izy io dia manana fahombiazana tsara sy fanoherana avo ny akanjo. Mitondra, boaty fanamoriana, lavitra ny vatan'ny valva, alaviro ny fitaoman'ny hafanana sy vovoka avo. Ny fonony eo aloha sy aoriana dia manana fahombiazana famehezana tsara, misoroka ny famoahana vovoka, ary manalava ny androm-piainan'ny faritra sy ny rafitra fanosorana.
Siansa momba ny tontolo iainana
Taham-pahafahana t / h
Fomba fanitsiana ny tahan'ny sakafo
Fampitana tsy misy dingana amin'ny tanana
Fiovan'ny hafainganam-pandeha tsy miovaova matetika
Karazana porofo mipoaka
Previous: OEM Manufacturer Warehouse Wall Rapper - efijery azo ahodina tsy azo ovaina CGS - Chengxin
Manaraka: Feeder kapila habetsahan'ny CypB